मन्त्रीहरुको काम समीक्षा – भाग १ (जनता कोसँग खुशी छन्, कोसंग बेखुशी ?) - Livenp
मन्त्रीहरुको काम समीक्षा – भाग १ (जनता कोसँग खुशी छन्, कोसंग बेखुशी ?)
२६ असार २०७६, बिहीबार १८:५६
“देश विदेशको खबर,जनताको खबर, रास्ट्रको सच्चा पहरेदार ” भन्ने स्लोगनका साथ् शुरु भएको हाम्रो अनलाइन पत्रिका ejanatakhabar.com ले जहिले पनि जनता र जनहितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाचार प्रकाशित गर्ने गर्दछ। कुनै शक्ति केन्द्रको पक्षपोषण भन्दा पनि स्वतन्त्र र निस्पक्ष समाचार र विश्लेषण प्रस्तुत गरेर जनतालाई खुशी पार्ने र जनमत बुझ्ने यो अनलाइनको उदेश्य रहेको छ। बिकसित देशहरुमा जनमत बुझ्ने कामलाई महत्वको साथ लिईन्छ। जनमत बुझ्ने र त्यसलाई प्रकाशित गर्ने काम सौख भन्दा पनि ब्यबसायिक रुपले नै सफल भएको देखिन्छ। Nielson Poll , Gallup Poll , Marist Institute for Public Opinion, Monmouth University Polling Institute जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई सत्तापक्ष विपक्ष सबैले ध्यानपूर्बक पढ्ने गरेको पाईन्छ किनकी हरेक पाँच बर्षमा चुनाबमा होमिनु नै पर्छ र त्यसको हारजीत स्वाभाविक रुपमा अस्तित्वसंग गासिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यस्ता खालका सर्वेक्षणहरु गरिएको छैन , हामीहरुले अब नियमित रुपले टेलिफोन र इन्टरनेट मार्फत जनमत सर्वेक्षण गर्न थालेका छौं।
यस पटक हामीले सरकारको काम बारेमा प्रश्न राखेका थियौं। सरकार गठन भएको ९ महीनामा यो सरकारको काम तपाईलाई कस्तो लागेको छ भनेर ३ वटा अप्सनहरु राखिएका थिए। जसमा २२ प्रतिशत इ मतदाताहरुले सरकारको काम राम्रो छ भने र त्यसको झन्डै दोब्बर (४० प्रतिशत ) जनताले सरकारले राम्रो गरेको छैन भनेर आफ्नो मत जाहेर गरे। तैपनि ३८ प्रतिशत मतदाताहरुले सरकारको कामलाई ठीकै भनेर टाउको हल्लाएको देखिन्छ, अहिले नै चुनाब भएको खण्डमा शायद यो ‘ठीकै’ भन्ने मत नै निर्णायक हुने देखिन्छ। ९ महीनामा नै यो सर्वेक्षण किन राखिएको हो भने करीब दुई दशक अगाडि तात्कालीन एमालेको अल्पमतको ९ महिने सरकारले गरेको राम्रो कामलाई अझै विभिन्न बेलामा उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ। तर अहिलेको दुई तिहाईको सरकारको बारेमा किन यस्तो जनमत देखियो त ? यसको बारेमा र केही मन्त्रीहरुले गरेका सकारात्मक कामहरु र केहीले देखाएका कमजोरीहरुको बारेमा हामीहरुले स्वन्तन्त्र विश्लेषण गर्नेछौं।
लाईभ नेपाली समाचार@Livenp_dot_com
नेकपाको सरकारले9महीना पूरा गरेको छ, नौ महीना सम्मको सरकारको काम तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?!!
* धेरैको मत बुझ्न Retweet गर्नुहोला..334:40 PM – Nov 15, 2018Twitter Ads info and privacy20%राम्रो 😍😍38%ठीकै 😐😐42%नराम्रो 😠😠237 votes•Final results26 people are talking about this
मन्त्रीहरुको कामको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा पहिले राम्रो काम गर्ने मन्त्री गोकर्ण बिष्टबाट शुरु गर्नु मनासिब देखिन्छ। श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिकहरुको हक र सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण नीति बनाउन सफल भएका छन्। मलेशियासंग एकदम राम्रो हिसाबको श्रम सम्झौता गर्न सफल उनको कामले म्यानपावर कम्पनीहरुको ठगीलाई कम गर्ने र श्रमिकहरुको हितलाई राम्रोसंग सम्बोधन गर्ने देखिन्छ। उनले ल्याएको अर्को नीति झन् बैज्ञानिक छ। सबै श्रमिकहरुलाई अनिबार्य रुपमा बैंक खातामा तलब दिईनु पर्ने नीतिले गर्दा श्रमिकहरु ठगिनबाट बच्दछन। सरकारलाई पनि आयकर उठाउन सजिलो हुने गर्दछ। यो नियमलाई ब्यबस्थित रुपले लागू गर्न सकेको खण्डमा देश र जनताले निकै ठुलो लाभ उठाउन सक्ने थिए।
त्यस्तै राम्रो काम गर्ने मन्त्रीको सूचीमा मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी पनि माथिल्लो नम्बरमा आउँछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेको दिनमा नै उनले Visit Nepal 2020 जस्तो एकदम राम्रो अभियानको घोषणा गरेका थिए। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटकहरुलाई नेपाल भित्र्याउनको लागि एयरपोर्ट सुधार देखि अन्य सबै कामहरु गर्न उनी क्रियाशील भएर लागिरहेका देखिन्छन्।बर्षौं देखि थन्किएका एयरपोर्टहरुको संचालन देखि लिएर पोखरा विमानस्थल, भैरहवाको गौतम बुद्द अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा तीब्रता आएको छ। देशको बिकासमा कोशे ढुंगा साबित गर्न सक्ने निजगढ़ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ। विमानको अभाबमा परेको नेपाल एयरलाइन्सले वाइड बडी जहाज हासिल गरेर आफ्नो कार्य क्षमतामा वृद्धि गरेको छ। लाखौंको संख्यामा संसारभर रहेका नेपालीहरुले नेपाल आवत जावत गर्नको लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरे भने मात्रै पनि नेपालले अरबौं कमाउन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै Visit Nepal 2020 मा ठुलो संख्यामा गुणस्तरीय पर्यटकहरु भित्र्याउन पनि नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीसंग राम्रा जहाजहरु हुनै पर्दथ्यो र अन्तत नेपालले पनि यति राम्रा गुणस्तरीय जहाजहरु प्राप्त गर्न सफल भएको छ। नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुको संख्यामा उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि भएको छ। भर्खरैको विश्व बैंकको रिपोर्टले पनि नेपालले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत सम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
तर पनि किन जनताहरु यस सरकार संग हुनु पर्ने जति सन्तुष्ट देखिदैनन भन्ने कुराको विश्लेषण जरुरी छ। यस लेखमा उठाउन खोजिएको अर्को मुख्य बिषय बिकास निर्माण संग सम्बन्धित छ। पर्यटन र श्रमको क्षेत्रमा जति उन्नति भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष्य उपभोग गर्ने र अनुभब गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत निकै कम हुने गर्छ। पर्यटन उद्योग र यसले दिने रोजगारीमा आश्रित जनसंख्याको प्रतिशत निकै सानो छ ,सन् २०१७ को तथ्यांक अनुसार पर्यटनले करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रोजगारी प्रदान गरेको छ । पर्यटन उद्योगको कारण देशले बिदेशी मुद्रा आर्जन गरेर बैदेशिक मुद्राको संचितिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सक्छ जसले गर्दा देशको मौद्रिक सन्तुलन र बैदेशिक व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। तर सामान्यतया यस्ता कुराहरुमा सर्बसाधारण जनतालाई चासो हुने गर्दैन। सबै जनताले अनूभूत गर्ने सुधार भनेको सडक र खानेपानीको क्षेत्रमा भएको बिकास हो। शत प्रतिशत मानिसहरुले सडक र बाटो प्रयोग गर्दछन त्यसैले सडक वा बाटोमा भएको सुधारलाई प्रचार गर्न कुनै पत्रकार सम्मेलन गराउनु पर्दैन। फेसबुक टुइटरमा फोटो हालेर समाचार बनाउनु पर्दैन। सहजै जनताले देख्छन र अनूभूत गर्दछन। सडक बाटोका खाल्डा खुल्डी , हिलो धूलो र प्रदूषण कसै कसैलाई झीना मसिना कुरा लाग्लान तर जनताले सरकार भएको अनुभूति र मूल्याँकन गर्ने यस्तै कुराहरुमा हो। आखिर अर्को चुनाबमा तिनै जनता कहाँ भोट माग्न जानुपर्दछ र तिनै जनताको भोटले सरकारमा पुग्ने हो कि सडकमा पुग्ने हो निर्धारण गर्दछ। भनिन्छ कुनै पनि देशको बिकास र समृद्धि चौडा र चिल्ला सडक यात्रा गरेर मात्र आउन सक्दछ। यो तथ्य र नेपालका सडकहरुको दुर्दशालाई बिचार गर्दा सहजै सबैले अनुमान लगाउन सक्छन कि हाम्रो देश किन पछाडि परेको छ भनेर। युरोप अमेरिकाको सडकलाई छोडौं। चीन र भारतको सडकको तुलनामा पुग्न पनि कयौं दशक लाग्नेछ हाम्रो देशलाई , यदि यस्तै पाराले जाने हो भने। धूलो र धूवा तथा प्रदूषणले गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने मात्र हैन पर्यटकहरुको अगाडि देशको इमेज बिगारेर पर्यटन उद्योगलाई समेत प्रभावित गरेको छ । कोही कोही व्यक्तिहरु फोश्रो तर्क गर्दछन , त्यत्रो घर हुने मान्छेले आफ्नो घर अगाडी आफैं पिच गर्नु आफैं बाटो बनाउनु नि। तर यस्तो तर्कले सरकारलाई झन् ठुलो हानी गर्दछ। सबै जनता सचेत छन् आफुले तिरेको करको बारेमा। व्यक्तिसंग थोरै पैसा हुन्छ त्यसैले बाटो राम्रो बनाउन व्यक्तिले खर्च गर्न सक्दैन, त्यही कामको लागि भनेर जनताले सरकारलाई कर तिरेर ढुकुटी भरिदिएका हुन्छन। सरकारको काम हो बाटो राम्रो बनाउने, यो कुरामा अन्यथा तर्क बितर्क गर्नु भनेको सीधै जनताको गाली खानु हो र थप अलोकप्रिय हुनु हो। त्यसैले बाटो राम्रो बनाएर जनताको मन जित्नु र देश बिकास गर्नुको बिकल्प छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ सरकारले। बाटो निर्माण र सम्भारको विभागमा काम गर्ने मन्त्री रघुबीर महासेठको काम राम्रो देखिएको छैन जसले गर्दा यो सरकारलाई निकै संकट पर्न सक्छ अर्को चुनाबमा जनताहरुबाट। अब जाउँ हाम्रो देशका बाटा घाटा र सडकहरु किन राम्रो बन्न सकेनन भन्ने विश्लेषण गर्न। चीनको संघाई शहरको यातायात ब्यबस्था विभागले यातायात सम्बन्धी बजेट र करको बिषयमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। रिपोर्ट भन्छ, एक साल संघाई शहरमा उठेको यातातात दस्तुर तथा करले ३ सालको लागि कर्मचारीको लागि तलब सुबिधा पुग्दछ। २ सालको लागि बचेको पैसा सडक मर्मत र बिकास गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले सांघाई शहरका सडकहरु चिल्ला र सफा छन्। हाम्रो देशमा भ्रस्टाचार हुने क्षेत्र भनेकै यातायात र मालपोत हो। हाम्रो देशमा चीनमा जस्तो भ्रस्टाचार बिरोधी कडा कानून छैन र पश्चिमा देशहरुमा जस्तो खुलापन र पारदर्शिता पनि छैन। सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचार मौलाउने यस्तै ठाउमा हो। हाम्रा सडकहरु गए गुज्रेका छन् तर हामीहरुले यातायात, लाइसेन्स र सवारी दस्तुर चर्को बुझाएका छौं , किनकी यहा भ्रस्टाचार छ, अख्तियार प्रमुखले केही समय अघि भनेकै थिए, भ्रस्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने मालपोत र यातायातमा कर्मचारी पाउनै मुश्किल हुन्छ, त्यही भ्रस्टाचार नियन्त्रण गराउन तथा बिकास गर्नको लागि जनताले सांसद र मन्त्री बनाएका हुन्। जनताले तलब,सुबिधा यथेस्ट दिएकै छन् । तर भ्रस्टाचार गर्ने खालकै राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना बनाएका छौं हामीहरुले पनि संबिधान मार्फत। यसको बारेमा अर्को लेखमा छुट्टै तरीकाले गहन विश्लेषण हुनेछ। तर यो लेखको आशय पनि यही छ , केही मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेका छन् कृषि, पर्यटन, अर्थतन्त्र , श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा तर यातायात र बाटोघाटोको दुर्दशाले त्यसलाई छायामा पारिदिएको छ र अवस्थामा सुधार आउन नसके त्यसको परिणाम अर्को चुनाबमा अवश्य आउनेछ किनकी जनताहरुमा सामान्यतया सत्ता बिरोधी भाव (Anti -Incubency Tendency ) रहेको हुन्छ बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा भएको कुव्यवस्थालाई जनताले सहदैनन। यो सरकार असफल हुनु भनेको ५ बर्षको लागि देश र जनता असफल हुनु हो ।
….. बाँकी अर्को लेखमा ….